Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, elinye lamathuba angcono kakhulu izindlela zokuxilonga for yezifo yegazi imilenze kuyinto emithanjeni ultrasound wemikhawulo aphansi. Le nqubo enqunyiwe uma isiguli ekhononda ka ubuhlungu emikhawulweni ephansi, ukusinda, ukuvuvukala, amajaqamba. It is ibuye Kunconywa ukwenza ultrasound nasemilenzeni aphansi uma ukushintsha ukubukeka imithambo yokukhulisa kubo.
Inani ultrasonography wemikhawulo aphansi:
1. Le nqubo kuyadingeka ngoba uyayazi imbangela.
2. Ukusetshenziswa isifundo esinjalo kungembula yezinkinga masinya, okungakwazi kwenziwe ukuhlolwa okuvamile.
3. ultrasound Kudingekile kuyinto emikhawulweni ephansi futhi ukukhetha imithi elilungile.
4. Ngaphezu kwalokho, ukwenza i-ultrasound kusiza ukulandelela ukuphumelela ukwelashwa.
5. Nale nqubo kungenzeka ukuhlonza thrombi, umthambo isakhiwo ushintsho, ukuhlola isimo kwegazi.
Izici ultrasound aphansi esitho emithanjeni
Le nqubo kungcono ngoba iziguli abaphethwe yizifo ngezifo zezinyawo. Uma siqhathanisa ngayo rheovasography, US Ngaphezu ulwazi, njengoba ikuvumela ukuba ukuhlonza izimbangela yokuphazamiseka okwamanje cwaningo. Uma iqhathaniswa nezinhloko-angiography emalini ongaphambili. Ultrasound ubulokhu ihlala etholakalayo iziguli bobudala obungefani namaqembu omphakathi. Ngaphezu kwalokho, le nqubo ibizwa ngokuphelele okungenangozi ke kungenziwa izikhathi ezimbalwa, it akudingi ukuqeqeshwa okwengeziwe.
- ekutadisheni isimo ukugeleza kwegazi, kanye inzuzo eyengeziwe kungenziwa ngokuthi ukuthi ovunyelwe ukuqhuba ucwaningo futhi ime mpo noma ovundlile;
- itholwa ngosizo esingamahlalakhona emithambo yegazi wemikhawulo aphansi, esingamahlalakhona emithambo yegazi of valve;
- ukuthola nokuminyaniseka consequently pathologies semithambo;
- ukusungulwa inani amahlule indawo yabo;
- kwencazelo egijima iziyaluyalu ukuthi kabi kutholakala ukuthi uphethwe yini nganoma iyiphi enye indlela.
Okudingeka ngenjongo uphethwe ultrasonic
Ezimweni eziningi, lolu hlobo inqubo kuboniswa ababanjwe ngamaphoyisa aphansi izifo umlenze (isb, varicose umthambo), ngoba sitholakele varices jikelele, ukukhomba zonke yezinkinga kungenzeka. Futhi, le ndlela Kuhlolisisa nje Irreplaceable, lapho ukuqhuba luhlolo ahlukene kwemithambo kanye emithanjeni.
Ultrasound kuyadingeka futhi efanele ngenjongo yokwelapha eziyinkimbinkimbi. Ngaphezu kwalokho, ukwenza i-ultrasound kukuvumela ukuthi ulawule inqubo yokwelapha, ukuqapha ukusebenza yayo. Phakathi udokotela angaba zibeka isikhathi ultrasound eziningana. Kubaluleke kobuhlungu, ayinayo imiphumela elimazayo emzimbeni womuntu futhi ayidingi ukwethulwa iyiphi imithi. Futhi, kaningi linqume ultrasound ukuhlola iziguli beyizidlova ukwakhiwa amahlule, ngenxa okuyinto thromboembolism kungenzeka. Yiqiniso, kukhona inqubo yabo, kodwa iqiniso liwukuthi izindleko US lingaphansi kakhulu kunalelo izifundo ezikhethekile, kodwa imiphumela yokuba khona kwawo kungekhona ukuthi sezizimbi kakhulu ukuze kuhlonzwe yalesi sifo.
Kangakanani scarlet fever? imfiva Scarlet: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, zokuvimbela
"I-Viber" noma "i-Weiber" - indlela efanele yokubiza ngayo? Iyini inhloso yaloluhlelo nokuthi ungayisebenzisa kanjani?
Indlela ukulungiselela ukuhlolwa emlandweni? Izici ukuhlolwa, izidingo kanye nezincomo
Kanjani ukuzenzela igama kwamaqembu enhle "Maynkraft"?
Demand - kuba isakhi esibalulekile ekuthuthukiseni emakethe
Ingane 1 unyaka futhi 2 izinyanga: ukuthuthukiswa, ukuphakama, isisindo, ukuphila kwansuku zonke
Owesilisa isandla ukhilimu. Yini-ke nokuthi ukukhetha okungcono?